सप्तरी घटनाका मृतककी आमाले भनिन्– छोरो मर्यो‍, अब पैसाले के हुन्छ? - Naya Patrika
सप्तरी घटनाका मृतककी आमाले भनिन्– छोरो मर्यो‍, अब पैसाले के हुन्छ?
रामनारायण विश्वास | चैत ०८, २०७३
मलेठ/तमलोपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर सोमबार खाममा २५ हजार रुपैयाँ हालेर सप्तरी मलेठ पुगे । उनी २३ फागनुमा मलेठमा भएको मधेसी मोर्चा र प्रहरीबीचको झडपमा मृत्यु भएका सञ्जन मेहताकी आमा शान्तिदेवीलाई सान्त्वना दिन पुगेका थिए । तर, शान्तिदेवीको प्रश्नले उनी नाजवाफ बने ।
६० वर्षीया शान्तिदेवीले लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका नेतासमेत रहेका ठाकुरलाई मैथिलीमा सोधिन्, ‘पैसासँ कि हेते, हमर बेटा घुरिके थोरी येते ?’ (पैसाले के हुन्छ, मेरो छोरा अब फर्केर आउन सक्छ ?) शान्तिदेवीको प्रश्नले नाजवाफ बनेका ठाकुरले केहीबरेपछि भने, ‘सञ्जनले मधेस र मधेसीको हकअधिकारका लागि बलिदान दिए, हामी उनको बलिदानको मूल्य राज्यसित लिएर छाड्छौँ ।’ ठाकुरले केन्द्रीय सदस्य रामप्रीत यादवमार्फत पार्टीको तर्फबाट भन्दै खाममा रहेको २५ हजार रुपैयाँ दिए ।
नौ महिनाअघि बिहे भएकी सञ्जनकी श्रीमती सवितालाई पनि परिवारजनले नेताहरूसमक्ष लगेका थिए । तर, उनी केही बोल्न सकिनन् । श्रीमान्को मृत्यु भएदेखि उनी अर्धचेतजस्तै छिन् । सरकारी जागिर खाने इच्छा रहेको बताउने उनी १२ कक्षामा अध्ययनरत छिन् ।
सोमबार सप्तरीमा हावाहुरीसँगै असिना–पानी परेको थियो । मौसमले साथ नदिए पनि तमलोपाका नेताहरू मलेठ घटनाका मृतक पीताम्बर मण्डल र वीरेन्द्र मेहताको परिवारसमक्ष पनि पुगे र पार्टीको तर्फबाट भन्दै जनही २५–२५ हजार रुपैयाँ सहयोग गरे । तमलोपाका नेताहरूले सोही घटनाका मृतक प्रसवनीका अहेब आनन्द साह र जमुनीमधेपुरका इन्द्रदेव यादवको परिवारलाई पनि नगद सहयोग गरेका छन् ।
‘संशोधनविना चुनाव असम्भव’
त्यसक्रममा अध्यक्ष ठाकुरले संविधान संशोधन नभएसम्म स्थानीय तहको चुनाव असम्भव रहेको बताए । उनले आफूहरूको माग नै परिमार्जनसहितको संविधान संशोधन भएको भन्दै संविधान संशोधन नगरी गरिएको चुनावमा जान नसकिने बताए । उनले संविधान संशोधनमा सीमांकन परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए । ‘हामीले संशोधनविना चुनावमा नजाने भनिसकेका छौ“,’ उनले भने, ‘सीमांकन परिमार्जनविना संविधान संशोधन गर्ने कुरा सत्ताधारीको प्रचारबाजी मात्रै हो ।’
मधेसका जनताको संघर्षको निष्कर्ष नै संविधान संशोधन रहेको भन्दै उनले अहिलेको संविधानबाट जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि खोस्ने काम भएको दाबी गरे । ‘सम्झौता भएको छ, लेखिएको छ,’ उनले भने, ‘तर पाएको अधिकार पनि संविधानबाट खोसियो, अधिकार नपाएसम्म संघर्ष जारी रहनेछ ।’